Email Marketing: Mfe Ndị debanyere aha Ndepụta Nchịkọta | Martech Zone
Email Marketing: Mfe Ndebanye aha Ndepụta Nyocha
Wednesday, May 27, 2020 Thursday, May 28, 2020 Douglas Karr
Onye debanyere aha njigide nwere mgbọrọgwụ na ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ. Afọ ole na ole gara aga, arụrụ m ọrụ maka otu ụlọ ọrụ na-ere ahịa data ọkachamara na Ndenye aha Ndenye akwụkwọ akụkọ. Otu n'ime usoro dị mkpa maka ịkesa na azụmaahịa maka atụmanya nke ndenye aha bụ ikike ha nwere 'ijigide'. Anyị achọghị (mgbe niile) ịzụ ahịa gaa na atụmanya ndị na-agaghị ejigide nke ọma, mgbe anyị chọrọ inweta atụmanya dị mma, anyị ga-ere ahịa na agbata obi na ezinụlọ ndị anyị maara na ha ejidere nke ọma. Yabụ, ha jidere izu 13 pụrụ iche wee gbapụta ha, ha ga-emezigharị ma rapara gburugburu.
Iji nyochaa ka ngwaahịa ahụ si arụ ọrụ nke ọma yana ahịa anyị na-eme nke ọma, anyị ga-anọgide na-enyocha njigide ndị ahịa anyị. Nke a ga-enyere anyị aka ịnọsi ike n'ihe mgbaru ọsọ. Ọzọkwa, ọ ga-enyekwara anyị aka ịkọ atụmatụ ole ndị ahịa ga-ahapụ na ịnọ ka anyị wee nwee ike ịhazi mkpọsa nnweta anyị. N'oge ọnwa ọkọchị ebe ndị mmadụ ga-aga ezumike, anyị nwere ike ịre ahịa na ndagide njigide na-ejigide naanị iji mee ka ọnụọgụgụ (ndebanye aha ọnụahịa = dollar mgbasa ozi na ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ).
Gịnị Mere I Ji Kwesịrị Inyocha Njide Ndepụta Ndepụta?
O juru m anya na, nyere uru nke adreesị ozi-e, ndị na-ere ahịa email anabataghị nyocha njigide. Nyocha njigide na ndị debanyere aha email bara uru maka ọtụtụ ebumnuche:
Na njide dị ala na-abịa nchịkọta mkpesa / spam dị elu. Nlekota njigide ndepụta gị ga - enyere gị aka iwulite aha gị ma zere nsogbu ịnapụta na ndị na-eweta ọrụ ịntanetị.
Isetịpụ ebumnuche njigide bụ ụzọ dị ukwuu iji hụ na ọdịnaya gị dị ụgbụ. Ọ ga-isi gwa gị ugboro ole i nwere ike n'ihe ize ndụ ogbenye ọdịnaya tupu a debanyere aha kpebiri ka mgbapụta.
Njide njigide ga-agwa gị ihe ọjọọ ndepụta gị na-eweda ala na ole ndị debanyere aha ị ga-anọgide na-agbakwunye iji debe ndepụta gị na; n’ihi ya, ebumnuche ego gị.
Etu esi tụọ njigide na nkwalite na ndepụta Email Subscriber gị
Ihe nlere nke m nyere ebe a bụ nke mebere kpamkpam, mana ị ga - ahụ etu ọ ga - esi nyere aka. N'okwu a, (lee eserese) enwere nkwụsị na izu 4 yana ọzọ na izu 10. Ọ bụrụ na nke a bụ ezigbo ihe atụ, enwere m ike itinye ụfọdụ ọdịnaya dị ike gburugburu akara izu 4 nke na-agbakwunye ụfọdụ zip na mkpọsa ahụ! Otu na izu 10!
Iji malite, mpempe akwụkwọ m na-eji eme ihe na-ewere onye ọ bụla debanyere aha ya wee gbakọọ ụbọchị ha malitere na ụbọchị wepu aha ha (ọ bụrụ na ha edeghị aha. Jide n'aka na ị ga-achọpụta ngụkọta oge - ha na-arụ ọrụ dị mma nke ịzobe ozi ebe ọ ga-abụ oghere na-agụta nanị na ọnọdụ.
Ga-ahụ grid ahụ na - eweta ụbọchị ole ha debara aha ha ma ọ bụrụ na ha edeghị aha. Nke a bụ ozi m ga-eji na ngalaba nke abụọ nke nyocha iji gbakọọ ọnụego njide kwa izu.
Usoro njigide bụ ụkpụrụ mara mma na ụlọ ọrụ ọ bụla na-atụle ndenye aha, mana enwere ike iji ya iji nyochaa njigide maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ - nnyefe nri (ole nnyefe na ugboro ole tupu mmadụ ahapụ ihe ọma… ikekwe 'ekele' pụrụ iche tupu nke ahụ Akara dị n'usoro), ịkpụ ntutu, mgbazinye ihe nkiri… ị ga-akpọ ya ma ị nwere ike gbakọọ njigide na njigide maka onye ahịa gị.
Idebe ndị ahịa anaghị adịkarị ọnụ ala karịa inweta ndị ọhụrụ. Nwere ike iji nyocha njide iji gbakọọ ma nyochaa akụkụ njide gị.
Site na ihe omuma m, ị ga-ahụ na naanị iji debe ndepụta m, m ga-agbakwunye 30 +% ọzọ nke ndị debanyere aha n'ime ọnwa ole na ole. Enweghị ụkpụrụ ịre ahịa Email ugbu a maka nyocha njigide - yabụ dabere na ụlọ ọrụ gị na mkpọsa gị, njide na ndetu ndepụta gị nwere ike ịdị iche iche.
Budata ebe nchekwa Excel
Budata Sample Excel Spreadsheet
Nke a bụ naanị ihe atụ siri ike m tinyere ọnụ maka ọkwa a. Agbanyeghị, ọ na - ejide ozi niile ịchọrọ iji nyochaa njigide gị. Naanị pịa aka nri na eserese dị n'okpuru ma mee 'Chekwa Ka' iji budata mpempe akwụkwọ m wuru na mpaghara.
Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka iji mee ụdị nyocha a na ndepụta gị, gwa m! Ọ na-abata na ya mgbe ị nwere ezinụlọ, omume igwe mmadụ, omume, ọdịnaya, na data mmefu. Nke ahụ na-enye gị ohere ịme ụfọdụ nkewa dị ịtụnanya iji zụọ ahịa na ọdịnaya gị na ndị na-ege gị ntị.
Tags: usoro emailemail ndepụta ntụgharịmetric emailemail njigideexcelndetu njigidendepụta ntụgharịnjigidendenye aha ndebanye aha
Douglas Karr Wednesday, May 27, 2020 Thursday, May 28, 2020
Ihe 3 ahụ na-ekwu na B2B CMO ọ bụla kwesịrị ịdị ndụ ma nwee ọganihu na 2020
Otu esi eme ka onu ahia mgbanwe di iche na obere obere ego